Madaxweyne xasan"dayntii soomaaliya waan bixi nay" * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 Last updated Nov 22, 2016
Madaxweyne Xasan Shiikh oo war cusub ka soo saaray deymihii uu caalamku ku lahaa SomaliaMadaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa shaaca ka qaaday in dowladiisu ay bixisay deymihii uu caalamku ku lahaa Somalia.
Xasan Sheekh ayaa hadalkan ka jeediyay Xaflad xalay ka dhacday Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir taasoo lagu maamuusayey sanadguuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu xilka la wareegay duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale.
Waxaa uu sheegay Madaxweynuhu in bixinta deymihii lagu lahaa ay tahay guul u tahay Somalia ayna taas ka saacideyso iney galangal badan ku yeelato arrimaha caalamka.
Deymaha ayuu xusay in qaar in la bixiyay kuwa kalena laga cafiyay Somalia, halka qaarka kalena loo sameeyay Jadwal Somalia ay ku bixineyso.
“Waxaan rabaa inaan caawa halkan ka sheego in deymihii iyo qaaraankii nalagu lahaa aan dib u bixinay, haddii ay tahay IGAD, Midowga Afrika iyo hay’adaha kale ee caalamiga ah, wixii nalagu lahaa waxna waan bixinay, waxna waa nalaga cafiyay, waxna jadwal ayaan u sameynay oo aan ku bixinayno, maanta meel kasta codkeena dib ayuu ugu noqday” ayuu yiri Madaxweyne Xasan.
Soomaaliya ayaa waxaa lagu lahaa lacag gaareysa illaa shan bilyan oo dollar, waxaana dad badan ay isweydiinayaan sida deymaha intaa le’eg ay dowlada Somalia ku bixin karto xili ay heystaan duruufo dhaqaale.
Hadalka madaxweynaha ayaa loo arkaa inuu qeyb yahay ololihiisa doorashada ee uu ku doonayo inuu mar kale dalka ku hogaamiyo afarta sano ee soo socota.